06 July, 2019 in Wararka by BANA Mogdishu Office
Guddigii daba galka ku hayay dadkii lagu laayay Galmudug gaar ahaanna Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ayaa gaaray dhinaca Puntland waxaana ay la kulmeen mas'uuliyiin ka mid ah Maamulka Puntland.
Wafdiga oo ku sugan Magaalada Boosaaso ayaa la fadhiistay Bulshada kasoo jeeda Deegaanada Koofur Galbeed, waxa ay kala hadleen sidii qaab wanaagsan ula noolaan lahaayeen dadka Boosaaso.
Sidoo kale mas’uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee Magaalada ayay kala hadleen sidii aan loo kala saari lahayn dadka Magaalada Boosaaso oo ah kuwo is dhex galay xagga dhaqanka iyo ganacsiga, isla markaana mas’uuliyad wadareed ay saaran tahay.
Xubnaha guddiga ayaa la kulmay madax katirsan Dowlad Goboleedka Puntland oo uu kamid yihiin Wasiirada Dekedaha, Arrimaha Gudaha, Gudoomiyaha Gobolka Bari iyo saraakiisha Ciidamada ammaanka.
Waxa ay tageen xabsiyo ku yaalla Magaalada Boosaaso oo ay ku xiran yihiin dad loo heysto dambiyo kala duwan, iyaga oo guddiga dalbaday in si cadaalad ah loo qaado kiiska loo heysto, halka kuwa aan dambiyada lahayn dib xoriyadooda loo siiyo.
Guddigaan oo loo xil saaray xaqiiqo raadinta dad lagu dhibaateeyay deegaanada Galmudug iyo Puntland ayaa wada dhageysi dadweyne, si dhinacyada ay ula kulmayaan wax ugu weydiiyaan dhibaatooyinka loo geysto dadka kasoo jeeda Koofurta Soomaaliya.
Xubnaha Guddiga ayaa isugu jiro Xildhibaanno katirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo kuwo ka socda Dowlad goboleedka Koofur Galbeed.
Waxa ay tageen Magaalada Gaalkacyo oo safarkooda ay ka bilaabeen, waxaana ay kulamo ay la qaateen Odoyaasha dhaqanka iyo maamulka Magaalada oo ay kala hadleen sidii aan dhibaato dambe loogu geysan lahayn dadka kasoo jeeda Deegaano dhaca Koofurta Dalka.
Guddiga ayaa usii gudbay Magaalada Garoowe oo ay kula kulmeen Odoyaasha dhaqanka iyo Maamulka Magaalada, waxaana ay kala fadhiisteen dhowrista dadka kasoo jeeda Koofurta ee kunool Magaalada Garoowe.
Warbixin uruurinta guddiga ay ka sameeyeen Gobolada Mudug, Nugaal iyo Bari waxa ay dib ugu soo celin doonaan guddoonka Golaha Shacabka oo markii hore magacaabay, halka qaybta ka socota Koofur Galbeed iyanna ay dib ugu celin doonaan Warbixintooda Agaasimaha la keensaday ee Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen.
the background of the new autonomy president Visits: 688529